Sary sokitra ivelany any Shina amidy orinasa mpanamboatra | Piedra
Volavola ivelan'ny trano amidy
Modely Tsia: MOS50
Te hividy sary sokitra any ivelany ve ianao hamidy？ Tena mahavariana tokoa raha atao haingon-trano amin'ny loharano. Ny azonay atao dia ny manamboatra sary sokitra sy manavao ny sary tsikelikely, izay mitondra sary sokitra vita soa ho anao. Azonao atao ny manamboatra endrika endrika, habe, loko sns. Raha misy zavatra mahaliana anao, azafady mba ampahafantaro anay.
Te hividy sary sokitra ivelany ve ianao hamidy?Tena mahatalanjona rehefa atao toy ny haingon-trano fantsakana. Ny azonay atao dia ny manamboatra sary sokitra sy manavao ny sary tsikelikely, izay mitondra sary sokitra vita soa ho anao. Azonao atao ny mamorona endrika endrika, habe, loko ary zavatra hafa. Raha misy zavatra mahaliana anao, azafady mba ampahafantaro anay.
Item NO. MOS50
Type Zavamaniry biby
Payment T / T (fametrahana 50% alohan'ny famokarana, 50% alohan'ny fandefasana)
fonosana Any ivelany ao anaty vata plywood, anaty anaty foam
Tonga ny fotoana 70-80 andro aorian'ny nametrahanao ny baiko (35-40 andro hamokarana, 25-35 andro hitaterana)
marika Afaka mandray baiko araky ny sary na sary araka izay tadiavinao izahay
Fenitra kalitao Manana ny ekipa QC matihaninay manokana izahay mba hahazoana antoka sy handinika ny kalitao.
Mazava ho azy fa mahafinaritra anay ny miarahaba ny ekipanao QC hanamarina ny kalitao ao
ny tranobentsika raha ilaina.
Fametrahana vy sokitra vy
Ny sary sokitra vy dia mila apetraka arakaraka ny toe-javatra iorenan'ny tranokala. Raha mila sary sokitra vy ny mpanjifa dia hiezaka ny farany vitantsika izahay hanao sary sokitra tanteraka sy mahatalanjona. Ny fametrahana marika stainless vy dia amboarina amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mahery. Izany hoe, ny hazondamosin'ny sary sokitra dia narafitra tamin'ilay vy napetaka teo amin'ny fototra namboarin'n'ny mpanjifa. Ary ny vy natsofoka dia niraikitra tao ambanin'ny fanamafisana. Ny halavan'ny fanamafisana sy ny haben'ny vy mihinana dia voafaritra arakaraka ny haben'ny sary sokitra. Hanome ny soso-kevitra tsara indrindra ho anay izahay fa hametraka am-pilaminana ny sary sokitra.
Fa maninona no mifidy antsika?
Mihoatra ny 13taona amin'ny sary sokitra vy vy.
Ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ny orinasa misy antsika dia manana traikefa mihoatra ny 13 taona.
Hiezaka araka izay tratry ny fahazoana misimisy kokoa ny mpanjifa mihoatra ny zavatra andrasanao. Ampidiro ny mpanao sary sokitra sy ny mpivarotra efa za-draharaha.
Ho an'ny filaminana kely dia mamela toerana kely ho anao apetraka amin'ny tany. Ho an'ny lehibe, dia hilaza aminao ny fomba fametrahana. Raha mila anay mametraka ianao dia tsara ho anay koa.
Previous: Sarivongana lehibe an-kalamanjana sary vongana sokitra haingon-tarehy vita amin'ny bozaka
Manaraka: Sary sokitra maoderina amidy
Ny sary sokitra zavakanto abstract maharitra miaraka amin'ny famoronana B ...
316L Stainless vy maoderina ivelany ivelany sary sokitra O ...
Sary sokitra vy matevina ankehitriny ...
Zava-maoderina maoderina ivelany ivelany sary sokitra vy matevina ...
Mirror ambonin'ilay sary sokitra hazo metaly 316L ...
Sary sokitra ahitra amidy